सलमान खानको 'दबंग द टुर' रद्द हुनुको खुल्यो रहस्य ! | जनदिशा
national tippadi आलेख
सलमान खानको ‘दबंग द टुर’ रद्द हुनुको खुल्यो रहस्य !
जनदिशा September 14, 2018	No Comments Bollywood Superstar Dabung the toursalman khan
काठमाडौं/सलमान खान ०७४ फागुन २६ गते ‘बलिउड सुपरस्टार दबंग द टुर’ नामक कार्यक्रमका लागि काठमाडौं आउने करिव निश्चित भएको थियो । सलमान खानसँगै बलिउड कलाकारहरु प्रभु देवा, सोनाक्षी सिन्हा, किर्ती सनन, मनिश पौल, डाइजी शाह तथा मिट ब्रोज आउने तय भएको थियो । टुबोर्ग बियरको प्रस्तुती रहेको कार्यक्रमको शोहेल खान इन्टरटेन्मेन्ट एन्ड जेए इभेन्टले व्यवस्थापन, स्क्रिप्ट र डाइरेक्सन रहने प्रचार सामग्रीमा लेखिएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँसम्मको टिकट काटिएको थियो । ५ हजारभन्दा बढी टिकट विक्री भइसकेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि सलमान खानलाई ५ करोड रुपैयाँ एडभान्स रकमसमेत आयोजकले दिइसकेको बताइएको थियो । कार्यक्रमका लागि खुल्ला मञ्च र सैनिक मञ्चमा समेत भव्य तयारी गरिएको थियो । तर फागुन १५ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपानिकट जनसाँस्कृतिक संगठनले सलमानको कार्यक्रम नगर्नका लागि वक्तव्य सार्वजनिक गर्र्यो । सरसर्ती हेर्दा यहाँसम्मको घटना सहजै देखिन्छ । तर सलमानको कार्यक्रम रोकिनुको भित्री कारण भने अर्कै भएको नेकपाभित्र अहिले चर्चा छ ।
नेकपा निकट सूत्रले बताए अनुसार करोडौं रुपैयाँ आम्दानी हुने ‘दबंग द टुर’ कार्यक्रमका आयोजकसँग नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले ९ करोड रुपैयाँको डिलिङ मिलाइसकेका थिए । सूत्रले भन्यो, ‘प्रकाण्ड कमरेडले ९ करोड डिलिङको अनुमति पार्टीबाट लिनु भएको थिएन । पार्टीको नाममा उहाँको व्यक्तिगत आर्थिक डिलिङ थियो ।’ ‘यसरी व्यक्तिगत डिलिङ गरेको सूचना पार्टीका केही नेतालाई भए पनि प्रकाण्ड कमरेडका विरुद्ध बोल्ने हिम्मत कसैले गर्ने कुरै भएन’, सूत्रले भन्यो, ‘त्यही थाहा पाएर हो कि के हो खेम कमरेड (खेम थपलिया) ले कार्यक्रम नगर्न वक्तव्य निकाल्नु भएछ ।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यो कार्यक्रमको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आइरहेको थियो । सूत्रले बताए अनुसार प्रकाण्डले ९ करोडको डिलिङमा कुरा मिलेपछि आयोजकलाई ढुक्क हुन भनेका थिए । यसबारे उनले विप्लवलाई पनि सबै कुरा प्रष्टसँग जानकारी गराएका थिएनन् । केवल ‘कार्यक्रम हुन दिनुपर्छ, आर्थिक मिल्छ’ मात्रै भनेका थिए ।
मिलिसकेको ९ करोडको डिलिङ पनि ‘अभागी’ प्रकाण्डले त्यतिबेला गुमाउनुप¥यो, जतिबेला उनकै पार्टीको भातृ संगठन अखिल नेपाल जनसाँस्कृतिक महासंघले सलमानको कार्यक्रमविरुद्ध कडा वक्तव्य जारी गर्‍यो ।
सो कार्यक्रमको उद्देश्य कलाकारिता प्रदर्शन गर्नु नभई रक्सीको प्रचारप्रसार गर्नु रहेको महासंघको निष्कर्ष थियो । त्यस्तो कार्यक्रम गर्न दिनका लागि आर्थिक ‘डिलिङ’ गर्नु क्रान्तिकारिता नभएको सूचना पाएका पार्टीका कतिपय नेताबीच त्यतिबेलै खासखुस हुने गरेको सूत्रले बतायो ।
त्यत्रो डिलिङमा पार्टीको जिम्मेवार नेतृत्वलाई गुमराहमा राखिएको प्रकाण्ड पक्राउ परेपछि विप्लव पार्टीभित्र व्यापक चर्चाको विषय बनेको छ ।
१५ गतेको वक्तव्यलगत्तै सलमान खान नेपाल आउने कार्यक्रम रद्द गरिएको थियो ।
चन्दाकै कारण आफ्नै पार्टीभित्रसमेत विवादित बनेका प्रकाण्ड यतिबेला प्रहरी नियन्त्रणमा छन् । उनका कारण विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई नैतिक संकट परेको समेत निकट स्रोतले बतायो ।
यसैबीच विप्लव नेतृत्वकोे नेकपाले पार्टी र नेतृत्वविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोपमा ५ जना सदस्यलाई पार्टीबाट निस्काशन गरेको जनाएको छ ।
पार्टीनिकट पत्रकारहरु प्रभात चलाउने (व्युरो सदस्य) र जिल्ला सदस्यहरु जन्मदेव जैसी, कमल बुढा, बाबुराम भुसाल र सुदीप बर्देवाले पार्टी र नेतृत्वका विरूद्ध सूचना चुहाएको, अराजकता सिर्जना गरेको नेकपा स्थायी समिति सदस्य तथा मध्यकेन्द्रीय कमाण्ड इन्चार्ज सुर्दशनले विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गरेका छन् ।
भदौ २८ गते एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदर्शनले उनीहरूलाई अनिश्चितकालका लागि पार्टीबाट निष्कासित गरिएको जनाएका छन् ।
कार्वाही गरिएकामध्ये केहीले प्रकाण्डको आडमा पार्टीभित्र रजगज गर्दै आएको पार्टीभित्रकै एकथरीको आरोप थियो ।
Previous Previous post: निर्मलाका हत्यारा छिटै पत्ता लाग्छन् : गृहमन्त्री थापा
Next Next post: अनमोलकी आमा सुस्मिताले गरिन् यी व्यक्तिसँग टिकाटालो